Pr Blanche Nirina Richard fait son entrée au gouvernement Ntsay Christian. Elle remplace Pr Rejo Félicité au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les 21 ministres du premier gouvernement Ntsay sont reconduits à leur poste respectif.
Les membres du 2e Gouvernement Christian Ntsay sont :
mercredi, 24 juillet 2019 20:52
Fitaterana fako – Antananarivo Renivohitra: Misedra tsy fahampiana ara-pitaovana ny SAMVA
Mihamivangongo ny fako amin’ny toerana sasantsasany eto Antananarivo Renivohitra. Olana ara-pitaovana no antony, raha ny fanazavan’ny orinasa SAMVA, mpanala fako, ao amin’ny pejiny facebook.
Raha tokony ho 16 isan'andro ny isan'ny fiara mandraoka fako dia 11 no miasa tato anatin’ny roa andro izay. Vokany dia maromaro ireo toerana tsy afaka nandraofana fako eto an-drenivohitra.
Efa mijery rindran-damina handraofana ny fako ny orinasa eo ampiandrasana ireo fitaovana nafarana.
Manentana ny mponina hatrany ny SAMVA hampiditra ny fako anaty daba sy hanaja ny ora fanariana fako amin'ny 05 ora hariva hatramin'ny 08 ora alina.
mercredi, 24 juillet 2019 20:45
Tontolo iainana: Hita eto Madagasikara ny 2% ny ala honko na « mangroves » manerantany
Mitahiry zava-maniry sy biby tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ihany. Mamelona ny tantely sy ny landy dia ihany koa, ary fonenan’ny drakaka, makamba sy ny sisa. Ny olana anefa dia tsy mbola manana paikady mazava hitantanana maharitra ny ala honko i Madagasikara.
Misy ny fikaonan-doha tanterahina mikasika indrindra izany tanterahina aty Toliara, izay maharitra telo andro nanomboka omaly 23 jolay hitohy hatramin’ny rahampitso 25 jolay 2019.
mercredi, 24 juillet 2019 20:20
Boris Johnson: Praiminisitra vaovao an’i Angletera
Niazo ny lapan’ny Mpanjaka ao Buckingham i Boris Johnson androany tolakandro, naka ny tsodranon’ny Mpanjakavavy Elisabeth II, ho Praiminisitra.
Nanome fe-potoana amin’ny 31 oktobra 2019 i Boris Johnson, hahatanterahan’ny Brexit, na ny fisintahan’i Angletera ao amin’ny Vondrona Eorôpeana, tsy misy fepetra.
Ben’ny tanànan’i Londres taloha i Boris Johnson, ary izy indray izao no lehiben’ny antoko « Conservateur » nandimby an’i Theresa May.
mercredi, 24 juillet 2019 20:02
TVM: Filazana ny mpikambana governemanta vaovao
mercredi, 24 juillet 2019 20:01
Tafatsangana ny governemanta
Milaza ny mpanolotra vaovao TVM fa efa tafatsangana ny governemanta, fa miandry ny fandaharana manokana hanolorana ireo mpikambana vaovao ao anatin'izany governemanta izany.
mercredi, 24 juillet 2019 19:56
Hivoaka izao amin'ny TVM ny fananganana ny governemanta, miainga avy eny Ambohitsorohitra.
mercredi, 24 juillet 2019 19:30
Fandraisana an’i Papa Ray Masina: Hovitaina hatramin’ny 22 aogositra ny toerana eny Soamandrakizay
Vita ny 95% ireo asa lehibe eny Soamandrakizay, Androhibe - Antananarivo hihaonan’i Papa Fransoa amin’ny mpino sy hanaovana ny sorona masina lehibe tarihiny amin’ny 8 septambra 2019. Ny fampitaovana sy fanorenana ny fotodrafitrasa handraisana ireo mpino 800 000 avy amin’ny lafy valon’ny Nosy, tombanana ho avy eny an-toerana.
Nijery sy nanara-maso ny fivoaran’ny asa teny an-toerana ny filoha Andry Rajoelina niaraka tamin’ny Kardinaly Mgr Désiré Tsarahazana sy ny solontenan’i Vatican eto Madagasiakra, Mgr Paollo Rocco Gualteri androany maraina.
Nomontsanin’ny Makis tamin’ny isa 33-00 i Maorisy tamin’ny lalao rugby lalaovin’olona fito, tamin’ny lalao voalohany natrehiny androany.
Resin’i Makis 21 noho 15 indray i La Réunion tamin’ny lalao faharoa androany.
Nomontsanin’ny Makis tamin’ny isa 40 no 7 ihany koa i Mayotte tamin’ny lalao fahatelo sady farany natao tamin’ity tolakandron'ny alarobia 24 jolay ity.